Archive du 20180523
Vahoakan’ny 13 mey Hirohotra ho eny amin’ny Toby Ratsimandrava
Omaly talata no nampanantsoin’ny “Element Mixte d’enquête” teny amin’ny Toby Ratsimandrava i Hery Rasoamaromaka, sekretera nasionalin’ny antoko TGV/MAPAR Analamanga, saingy ny mpisolovavany no nalefany.
Depiote Mamy Rajaonson « Mangataka ny mpitondra mba hiala tsimoramora »
Voizin’ny fitondrana ankehitriny, hoy ny fanehoan-kevitry ny depiote TIM lany tao amin’ny boriborintany faha-3 eto Antananarivo, Mamy Rajaonson fa miha reraky ny tolona ny Malagasy.
Fandrarana famoriam-bahoaka Resy indray ny fanjakana
Nandresy teny amin’ny Filankevi-panjakana ny fangatahana nataon’ny depioten’ny fanovana mba hanafoanana ilay didy mandrara ny famoriam-bahoaka isaky ny faritany ivelan’Antananarivo.
Pasteur Olivier Rakotondrainibe Hirotsaka ho kandidà filoham-pirenena
Na dia eo aza ny tsy filaminana eto amin`ny firenena, indrindra eo amin`ny tontolo politika dia mbola misy ireo kandidà maniry hiroso amin`ny fifidianana hatrany. Mahatsiaro ho tofoka tanteraka amin’ny tsy fetezan’ny fitantanana ny firenena i Pasteur Olivier Rakotodrainibe.
Depiote Rodin “Ahiana ho mampiasa mersenera Rosianina ny mpitondra”
Henoheno androany maraina, ary miparitaka aty amin’ny hafatra amin’ny findainay aty fa misy teratany Rosianina 4 any ahiahiana, hoy ny fanambaran’ny depiote Rakotomanjato Rodin omaly.
Antoko Teza “Tokony hisy fitsapan-kevi-bahoaka eto !”
Efa naverimberinay hatrany, hoy ny filohan’ny antoko Teza, Jean Louis Rakotoamboa fa ny fitsipiky ny demokrasia eto, izany hoe, ny lalàmpanorenana, ny lalàna mifehy ny antoko, ny lalàm-pifidianana, ny lalàna mifehy ny fifandraisana sy izay misy rehetra no tokony hovana sy hahitsy vao miditra amina dingana hafa.
Raharaham-pirenena malagasy Mangina ny iraisam-pirenena
Nisesy ireo vahiny namita iraka teto Madagasikara nandritra ny volana aprily hatramin`izao amin`ny hanaovana fampihavanana eto amintsika. Nandalo avokoa ny delegasionina teo amin`ny Firenena Mikambana, Vondrona Afrikanina, SADC…
CENI SY NY ECES Hiara-kiasa hanatanteraka fifidianana milamina
Mbola azo tanterahina tsara amin’ity taona 2018 ity ny fifidianana izay ho filoham-pirenena, hoy ny filohan’ny vaomiera misahana ny fifidianana Atoa Hery Rakotoarimanana na dia izao aza no zava-misy eto amin’ny firenena.
Ben’ny tanàna manerana ny nosy Zarain’ny fitondrana vola hiakatra eto Iarivo hamono afo
Manoloana ny tolom-bahoaka mahery vaika eto amin’ny kianjan’ny 13 mey Antananarivo iarahana amin’ny mpiray tanindrazana manerana ny nosy tarihan’ny depioten’ny fanovana 79.
Taratasin’i Jean Samy mahay mody fanina !
Eny ary koa ! Ianareo moa izany sady mahay mody jamba no mahay mody marenina. Izahay koa anie ry Jean mahay mody fanina e ! Samy mahay mody fanina isika raha izay no tadiavinareo.
Fampiofanana ireo ben’ny tanàna sy teknisianina Andrasana ny vokatra entiny
Nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny Hotely Solimotel Anosy ny fampiofanana natokana ho an’ireo ben’ny tanàna sy teknisianina avy amin’ny kaominina sy ny minisitera.
Toamasina Mitokona ny mpiasan’ny fananan-tany sy fandrefesan-tany
Taorian’ny fitokonana nampitsaharan’ny mpiasa ny asany teo anivon’ny ladoany na tsy an-tery aza izany satria mbola misy ireo miasa indrindra ireo inspekteran’ny fadintseranana sy ny sampandraharahan’ny hetra,
Tsy avotra intsony ity e !
Efa tena tsy avotra intsony fa fahagagana sisa andrasana, raha ny tsindry mahazo ity fanjakana ity!
Tetikasa fanamboaran-dalana Ny vahiny no tena mahazo tombony
Anisan’ny tondro iray ahafahana mitaratra ny fandrosoan’ny firenena ny fahatsaran’ny lalana ao aminy.
Anosizato sy ny manodidina Zazalahy kely 115 isa no noforaina maimaimpoana
Zazalahy kely 115 isa no indray noforaina maimaimpoana ny faran’ny herinandro teo teny Anosizato. Zazalahy kely avy ao Anosizato, Tanjombato, Itaosy sy ny manodidina izy ireo ka herin-taona latsaka no zandriny indrindra raha valo taona no zokiny.
Fitantanana ny harena an-dranomasina Saropiaro amin’ny azy ny mpanjono avy any Atsimo
Nisy ny atrikasa notanterahan’ny fikambanana mpanjono MIHARI tany Mangily faritr’i Toliara nanomboka ny 16 mey ary tapitra tamin’ny zoma 18 mey teo. Atrikasa niarahana tamin’ireo mpanjono madinika maherin’ny 50 ary nanaovana fifanakalozana sy fifampizarana, indrindra fitadiavana vahaolana ny amin’ny hetahetan’izy ireo. Araka izany dia nitodika amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny harena an-dranomasina izay fiveloman’izy ireo ny atrikasa.
Fandraharahana any amin’ny tontolo ambanivohitra Tsy misy ny paikady mazava eto Madagasikara
Omaly no nampahafantarina tetsy amin’ny EDBM ((Economic Development Board of Madagascar) ny fisian’ny atrikasa atao eny ifotony izay hakana ny hevitr’ireo mpiantsehatra rehetra any amin’ny tontolo ambanivohitra.
AMBANJA Nihena ny isan’ireo tanora tsy an’asa
Mbola betsaka ireo tanora tsy an’asa ao anatin’ny distrikan’Ambanja, raha araka ny fanadihadiana natao. Maro amin’izy ireo anefa no nahavita fianarana nefa voatery manao asa tsy mifanaraka amin’ny fari-pahaizany.
HIANTOHAN’NY MINISITRA PAUL RABARY
Hiantohan' ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary ny fianaran'ny zanaka vavin' Itompokolahy Sedera Rakotomalala, izay 7 taona, kilasy T3 izy amin'izao fotoana ary mandrapahatonga azy any amin' ny ambaratonga ambony izany, tsy izay ihany fa mbola horaisina ho mpiasam-panjakana ihany koa ny vady navelany.